Transposition Tower, Nkwurịta Okwu Tower Design, Mobile Antenna Tower - XY Tower
SiChuan XiangYue Power Line Components Co., Ltd. （nke a na-akpọ XY Tower） hiwere na 2008.
XY Tower bụ otu n'ime ndị kasị ibu ọkachamara nnyefe akara ụlọ elu-emepụta na n'ebe ọdịda anyanwụ China. The ụlọ ọrụ na-enye dị iche iche kpaliri ígwè owuwu, pụrụ iche na 500kV na n'okpuru ike akara elu, substation Ọdịdị, nkwurịta okwu ụlọ elu, electrified ụgbọ okporo ígwè Ọdịdị, wdg
⦁ Ahụmahụ 20 afọ na ụlọ ọrụ eletriki. Na-eji usoro mmepụta ihe na usoro nlekọta ozi.
A na-akwado usoro njikwa usoro okike ka ISO 9001: 2015, ISO 1461 Ma ọ bụ ASTMA123. ⦁ Achọrọ ka ndị ọrụ niile rụọ ọrụ na njikwa njikwa mma.
Na ahụmahụ otu ọrụ maka oversea ahịa ⦁ The nkezi na-arụ ọrụ ahụmahụ karịrị afọ 20 maka management otu
⦁ Mee ka okporo igwe dị ike. Mee njikọ ụwa. ⦁ Ogo buru ụzọ ， n'eziokwu izizi.
Sichuan XiangYue Ike akara mmiri Cop. (XY Tower) hiwere 2008. Na mbọ niile stof, com ...
XY Tower dị ka ụlọ ọrụ na-eduga na mpaghara anyị, onye isi obodo na-etinye oke mkpa ma na-achọ ...
N'ihi COVID-19, ndị ahịa anyị enweghị ike ịbịa n'ụlọ ọrụ anyị maka nyocha ụlọ elu. Na Nọvemba 9, tupu de ...
Revenue S20 nde ahịa na-enweta ego na ikike nke 30,000 tọn ⦁ 10 akpaka mmepụta edoghi na ndị ọrụ 150 ⦁ Ihe karịrị afọ 25 na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ọkụ eletrik ⦁ Ndị ọrụ otu ọkachamara maka ahịa
BIDI NA-EGO ABENTEUER
Akụrụngwa nke XY Tower Obi nke ụlọ ọrụ nrụpụta ọ bụla bụ akụrụngwa ya. XY Tower nwere ikike awụnyere iji rụpụta ụlọ elu puku 30,000 kwa afọ. XY Tower dị njikere izute ụkpụrụ kachasị mma nke ụwa. Nhazi nke ọma, ihe eji arụ ọrụ igwe na nnukwu ụlọ ọrụ nchekwa maka igwe na-enye XY Tower ngwaahịa dị mma dịka ihe siri ike nke ndị ahịa. Ationgha osisi na Chengdu e wuru na a plot measu ...
330kV okpukpu abụọ akaghị nnyefe ụlọ elu
Kedu ihe kpatara XY Tower Infrastructure of XY Tower ： Obi nke ụlọ ọrụ nrụpụta ọ bụla bụ akụrụngwa ya. XY Tower nwere ikike awụnyere iji rụpụta ụlọ elu puku 30,000 kwa afọ. XY Tower dị njikere izute ụkpụrụ kachasị mma nke ụwa. Nhazi nke ọma, ihe eji arụ ọrụ igwe na nnukwu ụlọ ọrụ nchekwa maka igwe na-enye XY Tower ngwaahịa dị mma dịka ihe siri ike nke ndị ahịa. Ationgha osisi na Chengdu bụ buil ...
330kV otu akaghị Y-ụdị nnyefe ụlọ elu
330kV okpukpu abụọ akaghị ụlọ elu
okpukpu abụọ gafere ụlọ elu osimiri
Ihe kpatara na XY Tower Towers abụghị naanị a na-ele anya dịka ngwaahịa, kamakwa dị ka ọrụ. Site na ịbịaru elu, ịgha ụgha, ịgbakọta akụrụngwa ọ bụla na nnyefe nke ngwaahịa ahaziri, XY Tower dị ugbu a na ọnụọgụ uru niile. Ndị Injinia na-enyere aka belata ụgwọ ọrụ ahụ maka ndị ahịa anyị site na ịmegharị Towerlọ Elu kachasị elu ma hụkwa na izi ezi nke ndozi nhazi ka ewepugharị mmezi saịtị. ọgụgụ isi n'ichepụta na n'ọtụtụ ebe etinyere anyị osisi. Njikwa Ngwaahịa bụ throug ...
Nzipu akara ụlọ elu
Towerlọ elu nkwukọrịta
Iron ngwa & Electric ike oyiyi akwa